600L Plastic oyi akpa
Product Atụmatụ Dị nri ọkwa Pee dị ka akụrụngwa, otu-nzọụkwụ imetụta abụọ-decker containers nwere ike zuru okè na-arụ ọrụ n'okpuru -40 ℃. Acid na alkali-eguzogide ọgwụ, siri ike na inogide. Steepụ a n'aka pallet Jack si abụọ n'akụkụ na site a forklift gwongworo si niile anọ n'akụkụ, stackable. Nso nke Ngwa a: Food mmepụta. b: Raw ihe oyi kpọnwụrụ nchekwa. c: Low okpomọkụ oyi nchekwa ntụgharị. d: Low okpomọkụ thawing nke aquatic ngwaahịa na anụ na ngwaahịa. e: Fresh na chilled refrigerated ...
550L Plastic gwara mmanụ Coolers ice igbe
65L Plastic gwara mmanụ Coolers ice igbe
Product Akụkụ a: Akwa ike na mkpebi siri, inogide b: One-nzọụkwụ imetụta abụọ-decker, ọma-akàrà, na-eju afọ mkpuchi onwunwe c: (ndịọrụ) ụfụfụ mkpuchi agbara na-okpomọkụ d: Virgin ihe MDPE nwere ike iji ozugbo nri e : Eguzogide ultraviolet ìhè (UV), fadeless Nso nke Ngwa Adabara oyi yinye nke ọhụrụ nri, ogwu na nkà mmụta ọgwụ. Dị mma nke ukwuu na ngwá na-eji na n'èzí na-atụrụ ndụ, dị ka, ịkụ azụ, na-ama ụlọikwuu wdg, All iche iche nke tra ...